Nhau - RFID tekinoroji yakavandudza zvakanyanya nhanho yekutonga yeindasitiri yekuwachisa
RFID tekinoroji yakavandudza zvakanyanya nhanho yekutonga yeindasitiri yekuwachisa
Sezvatinoziva tese, kushandiswa kweRFID muindasitiri yezvipfeko kwave kwakajairika, uye kunogona kuunza kuvandudzwa kwakakosha mune zvakawanda, zvichiita kuti indasitiri yese yedhijitari yedhijitari ivandudzwe zvakanyanya. Nekudaro, mumakore achangopfuura, indasitiri yekuwachira, iri padyo neindasitiri yezvipfeko, yakawanawo kuti kushandiswa kweRFID tekinoroji kunogona kuunza zvikomborero zvakawanda.
Parizvino, muindasitiri yekuwachisa, basa rekutonga data rinonyanya kuitwa nemaoko. Nokudaro, kazhinji hapana humbowo hunoratidza kururamisa kwezvinyorwa, kutariswa kwekuwacha kakawanda kwerineni, nhamba yemishonga inorema yevhu, uye kurasikirwa kwerineni. Inogona kuteverwa uye yakaunza dambudziko rakawanda kune manejimendi yerineni.
Usati wageza machira, fekitori yekuwachisa inoda kuona kurapwa kwemhando zvinoenderana nerudzi, magadzirirwo, chikamu chekushandisa, uye chikamu chetsvina. Kugadziriswa nemaoko kunowanzoda vanhu 2 ~ 8 kuti vapedze maawa akati wandei kuronga machira akasiyana mumachute akasiyana, izvo zvinotora nguva.
Uye zvakare, maitiro ekugadzirisa kurasikirwa muiyo logistics control link, nzira yekupindira nayo kana huwandu hwemahandovers hwakakura kana hudiki; maitiro ekutarisa inorema kusvibiswa mwero, kudai, yekune dzimwe nyika kuteedzera, uye kushungurudza traceability mune yerineni yekutevera link; maitiro ekutarisa mabasa ekuwachisa, chimiro chekugadzira uye machira mune yedhijitari manejimendi inobatanidza Kurasika kwehuswa uye kusimba kwekutarisa, yerineni kutenderera kushandiswa mwero, hotera inventory uye zombie linen control, nezvimwewo inzvimbo dzese dzinogona kuita RFID.
Zvinogona kutaurwa kuti tekinoroji yeRFID yakaunza shanduko nyowani kuindasitiri yekuwachisa. RFID washing tag inogona kubatsira kuona nguva yekugeza, kugeza zvinodiwa, ruzivo rwevatengi uye kuwacha frequency yezvinhu zvakarekodhwa, kuderedza mhosho yenguva yechinyakare yekushandisa, uye kuvandudza zvakanyanya manejimendi.
Nekudaro, mumashandisirwo anoshanda, kune zvakare mamwe matambudziko, anosanganisira machira, label stacking uye kukotama, hunyoro, tembiricha uye zvimwe zvinhu zvakawanda zvinokanganisa kuverenga kweiyo label. Nekudaro, kuitira kuti usangane nezvinetswa, vagadziri veRFID vakagadzira shanduko RFID ma tag ekuwachira asina kurukwa, RFID bhatani kuwachisa tags, silicone laundry tags uye mamwe ma-multi-material tags, ayo akakodzera zvinhu zvakasiyana-siyana zverineni, tembiricha yekuwachisa, uye nzira dzekuwacha.
Zvinogona kutaurwa kuti tekinoroji yeRFID yakaunza shanduko nyowani kuindasitiri yekuwachisa. RFID washing Laundry tags inogona kubatsira kuona nguva yekugeza, kugeza zvinodiwa, ruzivo rwevatengi uye kuwacha kakawanda kwezvinhu zvakarekodhwa, kuderedza mhosho yenguva yechinyakare yekushandisa, uye kuvandudza zvakanyanya manejimendi.
Nekudaro, mumashandisirwo anoshanda, kune zvakare mamwe matambudziko, anosanganisira machira, label stacking uye kukotama, hunyoro, tembiricha uye zvimwe zvinhu zvakawanda zvinokanganisa kuverenga kweiyo label. Nekudaro, kuti zvigadzirise zvirinani zvinonetsa, vagadziri veRFID vakagadzira ma tag anochinjika asiri-akarukwa ekuwachira, mabhatani ekuwachira ma tag, ma tag ekuwachisa masilicone uye mamwe ma tag emhando dzakasiyana-siyana, akakodzera zvinhu zvakasiyana-siyana zverineni, tembiricha yekuwachisa, uye nzira dzekuwacha.
Nguva yekutumira: Zvita-30-2021